अन्तर्वार्ता « News24 : Premium News Channel
जिल्लामा काँग्रेसको जति पनि गुट-उपगुटको खाडल छ, त्यसलाई पुरेर जानेछाैँ : नेता जवेगु
फिदिम । नेपाली काँग्रेस १४ औं महाधिवेशनको संघारमा छ । हाल मुलुकका अधिकांस जिल्लाका पालिकामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकि जिल्लाको पालिकामा पनि चाँडै अधिवेशन गर्ने काँग्रेसको तयारी छ
काठमाडौं । नेकपा एमाले विभाजन गरी माधव कुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठन भयाे । उक्त पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट वैधानिकता समेत पाएर अस्तित्वमा आएको छ । नवगठित पार्टीले
क्यान्सरभन्दा खतरनाक कालो ढुसी : कस्ता मानिसलाई संक्रमण हुन्छ ? यसबाट बच्न के गर्ने ?
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै नेपालमा पनि कालो ढुसी (ब्ल्याक फंगस) अर्थात् म्युकरकाइकोसिसका बिरामीहरु फेला परे । नेपालमा हालसम्म ३५ जनाभन्दा बढीमा कालो ढुसी संक्रमण भएको पाइएको त्रिवि शिक्षण
प्रोडक्टिभ’ हुन म्यूजिक भिडियो खेलेको हुँ : राजेश हमाल
नेपाली चलचित्र उद्योगको ‘पर्यावाची’ नामका रुपमा परिचित व्यक्ति हुन् राजेश हमाल । नेपाली चत्रचित्र उद्योगका हस्ती महानायक हमाल चलचत्र बाहेक सामाजिक कार्यमा पनि उत्तिकै व्यस्त व्यक्ति छन् । न्यूज २४
नेपाली झण्डावाला रेल उद्घाटन गर्ने सपना अधुरै रह्यो : निवर्तमान मन्त्री नेम्वाङ
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार लगभग तीन वर्ष संचालन गर्नुभयो । उहाँको कार्यकालमा धेरैपटक मन्त्रीमण्डल परिवर्तन भए । मन्त्रीहरु फेरबदलका कारण मुलुकको विकास तथा नीति निर्माणमै नकारात्मक असर समेत
अहिलेसम्म प्रेममा परेकी छैन : गायिका एलिना चौहान (भिडियो)
काठमाडाैँ । पछिल्लो समय चर्चामा रहेकी गायिका हुन्, ऐलिना चौहान् । सबै प्याटनमा गीत गाउन रुचाउने गायिका चौहान एकमात्र प्याटनमा गीत गाउँदा पछिसम्म चल्न गाह्राे हुन सक्ने बताउँछिन् । सांगीतिक
वर्तमान सरकारले ओली सरकारका सम्पूर्ण खर्च छानबिन गरेर सार्वजनिक गर्छ : नेता आङ्देम्बे
तस्बीर : महेश्वर के.सी.\_ न्यूज२४ नेपाल काठमाडौं । पटक-पटक सर्दै आएको नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन आउँदो भदौमा सम्पन्न हुने लगभग निश्चित छ । जिल्ला र वडा स्तरमा साउनमा सम्पन्न
विहे नगरी बच्चा जन्माउने इच्छा छ, त्यो पूरा गर्छु : नायिका नम्रता सापकोटा (भिडियो)
काठमाडौं । नायिका नम्रता सापकोटाले आफूसँग जोडिएर आएको प्रेमको चर्चालाई नकार्न नसक्ने बताएकी छन् । न्यूज २४ को ‘ई टक’ कार्यक्रममा बोल्दै आफू धेरै कोएक्टरसँग सँगत गर्नु परिरहेको अवस्थामा बाहिर
नेपाल संघीय संरचनामा गएपछि ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह कायम भएका छन् । २०७४ सालमा प्रदेश सरकार गठन भएयता प्रदेशले नै आफू मतहत विकास तथा योजनाहरु संचालनका लागि आफैले
भोलिदेखि रासन सकिँदै छ भने खबर गर्नुस्, हामी आजै व्यवस्था गर्छौं : मेयर आचार्य
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि विस्तारै विभिन्न विकासहरु लहरहरु पनि गाउँ–गाउँमा पुग्दैछन् । तर, विगत डेढ वर्षदेखि विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण मुलुकभरको विकास निर्माणका कामहरु प्रायः शून्य जस्तै बनेका छन्
थाहा नगरवासीका हरेक समस्या समाधान गर्न अपनत्वका साथ काम गरिरहेको छु : मेयर विस्ट
तरकारी खेतीका लागि प्रख्यात छ, मकवानपुरको थाहा नगरपालिका । काठमाडौँबाट नजिकै रहेकाे र त्रिभुवन राजमार्गले जोडिएको यो नगरपालिकामा पछिल्लो समय केही विकासे कामहरु पनि भएका छन् । स्थानीय सरकार आएपछि
प्रधानमन्त्रीलाई गगन थापाको अपील, ‘अक्सिजन आपूर्ति तथा वितरणको गाँठो फुकाउनुस्’ (भिडियो)
काठमाडौं । दोस्रो चरणको कोरोना महामारी मुलुकभर तीब्र रुपमा फैलिरहेको अवस्थामा अक्सिजनको अभावमा ज्यान गुमाउने कोरोना संक्रमितहरुको संख्या पनि दिनानु दिन बढिरहेका छन् । त्यस्तै, अस्पतालहरुले समेत अक्सिजनको अभावका कारण
प्रेमध्वज प्रधान – ‘जसले नेपाली गीत–संगीतलाई गौरवान्वित बनाए’ : शम्भुजित बास्कोटा (भिडियो)
काठमाडौं । नेपालका लोकप्रिय गायक प्रेमध्वज प्रधानको ८५ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । गायक प्रधानको गत विहीबार सुन्धारास्थित काठमाडौं न्यूरो तथा जनरल अस्पतालमा निधन भएको हो । अहिले नेपाली
प्रधानमन्त्री ओलीको ‘हिटलरी शासन’ अन्त्य नभएसम्म राजनीतिक संकट रहिरहन्छ : इन्द्रबहादुर आङ्वो
काठमाडौं, १८ चैत । प्रदेश १ को सरकार ढाल्न धेरै प्रयत्न भए । नेकपा माओवादीका सांसदहरुको अगुवाईमा प्रदेश- १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा एमालेकै धेरै सांसदहरुले पनि हस्ताक्षर
रामेछाप नगरपालिकाको सबै वस्तीमा सडक पुर्‍याउन सफल भयौं : उप-प्रमुख खड्का
स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका इमान्दार र विकासप्रति लगाव भएका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पालिकामा विकास निर्माणका कामहरु गरेर देखाएको उदाहरण धेरै ठाउँमा देख्न पाइन्छ । पालिकाको विकास नै आफुहरुको जिम्मेवारी र दायित्व
चीन र पाकिस्तानका विदेशमन्त्री बीच भर्चुअल वार्ता
कञ्चनपुरमा निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा
उत्तर कोरियामै पहिलो पटक एक जनामा कोभिड १९ को संक्रमण भेटियो
पैसा बाँडेको आरोपमा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष पक्राउ